ကယ်မှာလား?… မကယ်ဘူးလား? (သို့ ) ရေသူထီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » ကယ်မှာလား?… မကယ်ဘူးလား? (သို့ ) ရေသူထီး
ကယ်မှာလား?… မကယ်ဘူးလား? (သို့ ) ရေသူထီး
Posted by E.T on Oct 31, 2011 in Short Story | 23 comments
ဟိုနေ့ က “ ပနားမားတူးမြောင်း အမှတ်တရ ” ဓာတ်ပုံ တင်ရာမှာ… ကောမန့် ၌… ကိုရင်မောင်က သင်္ဘောသီး အကြောင်းလေးရေးပါဦး.. ဆိုလို့ ရေးပါတယ်။ ရေးတာနဲ့ စတွေ့ တာဘဲ… ကျွန်တော်က မူလတန်း မှ အထက်တန်း အထိ… မြန်မာစာမှာ စာစီစာကုံး ဆိုလို့ ကတော့… ဝေးဝေးရှောင် ဝေါင်ဝေါင်ရှေးပြီး …ချန်ခဲ့သည်က များပါတယ်။ ထို့ ကြောင့်လည်း ၁၀တန်းတွင် မြန်မာစာကို ဂုဏ်ထူး ၄၈မှတ်နှင့် အောင်ပါတယ်။ အင်း…ခေါင်းစဉ်ကတော့တက်လိုက်ပြီ နိဒါန်း ကိုဘယ်လိုစရမည် မသိ…ထိုကြောင့်…မဂ္ဂဇင်းစာအုပ် ပြေးလှန်ရ၏။ တွေ့ ပါပြီ မဂ္ဂဇင်းထဲတွင် ညဉ့် ၂ ချက်တီး အချိန်နှင့် စထား၏။
ကျွန်တော်ကတော့ ည ၁၀ ချက်တီး အချိန်နှင့်စမည်။ မအိပ်ရသေး…အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်…ကျွန်တော်၏ အလုပ်ချိန်က ၈ – ၁၂ နာရီ ပါ။ AB တို့ ရဲ့… တာဝန်ဝတ္တရား အတိုင်း… မှန်ပြောင်းတလက်နှင့် ဟိုကြည့် ဒီကြည့်ပေါ့။ ဓားပြတွေရဲ့ ရန်ကိုလည်း ကြောက်ရသေးတယ်…သိတယ်မှတ်လား… သူတို့ က ဓားတွေနှင့်… ကိုယ့်မှာက တုတ်ပဲရှိတယ်။ ဟိုကြည့် ဒီကြည့် အပြီး “ ရှင်းတယ် ” ဟု တာဝန်ကျ အရာရှိ ကိုပြောရသေးတယ်။ ရှင်းတယ်ဆိုတော့ ပျင်းတာပေါ့…အဲဒါနဲ့နှစ်ယောက်သား စကားပြောတယ်…ပြောရင်းပြောရင်း ရေသူမ အကြောင်း ရောက်သွားရော။ တကယ် ရှိ… မရှိ…ငြင်းကြခုန်ကြရင်း ၁၂ နာရီ ထိုးသွားပါရော။ အလုပ်ချိန် ပြီးပြီဆိုတော့… ဆက်၍ငြင်းမနေတော့…အိပ်ငိုက်ပြီလေ။ အဲဒါနဲ့တစ်ခါထဲ ဆင်းပြေးပြီး…တစ်ချိုးထဲ စက်တော်ခေါ်လိုက်တယ်။ ရေသူမ အကြောင်း ပြောထားလို့ လားမသိ…အိမ်မက်ထဲ…ရေသူမလေးတွေ ရောက်လာပါရော။ ဒါနဲ့ကောင်းခန်းရောက်နေတုန်း…ဂွမ်..ဂွမ်..ဂွမ်…ဆို နာရီနှိုးစက်မှ အသံက…မြည်ပါလေရော။
ကျွန်တော်လည်း ကမန်းကတန်းထ…မျက်နှာသစ်၊ သွားတိုက်၊ မနက်စာ စားပြီး…တာဝန်ဝတ္တရား အတိုင်း သင်္ဘောပဲ့ကိုင်ခန်းကိုတက်ပြီး…မှန်ပြောင်းတစ်လက်နှင့် ဟိုကြည့် ဒီကြည့်…စင်္ကာပူရေလက်ကြားရောက်လာပြီ ဆိုတော့…သင်္ဘောတွေ၊ ငါးဖမ်းလှေတွေ နှင့် ရှုပ်နေတာပေါ့…မကြာပါဘူး ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်းနဲ့သင်္ဘောအရှေ့ ၄ မိုင် လောက်မှာ မည်းမည်းလေး…ပေါ်လိုက်၊ ပျောက်လိုက်နဲ့ …ဘာလဲပေါ့။ သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်သေး…တဖြည်းဖြည်းနီးလာတော့…လက်လှမ်းပြပါလေရော။ ကျွန်တော်လည်း အိပ်ချင်မူးတူး နဲ့ ဆိုတော့…အိမ်မက်ထဲက ရေသူမများ ကိုယ်ထင်ပြလားပေါ့။ ဒါနဲ့ …တာဝန်ကျ အရာရှိကို သတင်းပို့ တာပေါ့…“ ရှေ့မှာ ရေသူမ..ရေသူမ ” ပေါ့။ သတင်းမပို့ လို့ လည်းမရ…ရေသူမက သင်္ဘောရှေ့တည့်တည့်ကြီးမှာ…ဒီအတိုင်းသွားလို့ ကတော့ ရေသူမက သင်္ဘောအောက်ရောက်…ပန်ကာနဲ့ခုတ်မိပြီး…တစစီ ဖြစ်သွားမည်။ သတင်းပို့ တော့ တာဝန်ကျ အရာရှိက ဘာပြောတယ်မှတ်တုန်း…မင်းက ညက ကိစ္စ အခဲမကြေလို့ လက်စားချေတာလားတဲ့။ ကျွန်တော်ကလည်း ဘာရမလဲ…မှန်ပြောင်းကြီး သူ့ လက်ထဲအတင်းထိုးထည့်ပြီး ကြည့်ခိုင်းတာပေါ့။ အဲဒီတော့မှ ကိုရွှေချောက ယုံသွားတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ တက်မကိုင်တဲ့နေရာကိုသွား…ဘာအမိန့် ပေးမလဲ စောင့်…သူကဘယ်ဘက် ၅ ဒီဂရီဆိုတော့…ခလုတ်ကို ဘယ်ဘက် ၅ ခါ နှိုပ်တာပေါ့။ အော်တိုဆိုတော့ သင်္ဘောက ဘယ်ဘက်ကို…အလိုလိုကွေ့ သွားတာတယ်။ သူကတော့ သူကြီးအခန်း ဖုန်းဆက်…ရှေ့မှ သင်္ဘောသားတွေကို စကားပြောစက်ထဲကနေ…ရှေ့မှာ လူတစ်ယောက် ရေထဲကျနေတယ် လှမ်းပြော…အင်ဂျင်ခန်းကို ဖုန်းဆက် အသင့်အနေအထား…လိုအပ်ရင် အရှိန်လျှော့ မယ်ပေါ့။ ရှေ့က သင်္ဘောသီးတွေကလည်း…Drill ထဲကအတိုင်း အသက်ကယ် ဘောကွင်းကြီးတွေကိုင်ပြီး အဆင်သင့် အနေအထားနဲ့စောင့်နေတာတယ်။
လာပါပြီဗျာ…သူကြီးမင်း…အိပ်မှုန်စုံမွှားနဲ့တက်လာပါရော။ တာဝန်ကျအရာရှိက သူကြီး ဘာလုပ်မှာလဲ…“ ကယ်မှာလား၊ မကယ်ဘူးလား” မေးတယ်… ၁ မိုင်လောက်ပဲ လိုတော့တယ်…ဘာပြန်ဖြေတယ်မှတ်လဲ မကယ်ဘူးတဲ့ဗျာ။ ပြီးတော့ နောက်က သင်္ဘောတွေကို လူတစ်ယောက်ရေထဲကျ နေတာကို သတင်းပို့ ခိုင်းတယ်။ ကျွန်တော်တို့သင်္ဘောက ရှေ့ဆုံးက…နောက်မှာ ၄ မိုင်မှာတစ်စီး၊ ၁၀ မိုင် လောက်မှာတစ်စီး လိုက်လာတဲ့ သင်္ဘောတွေ ရှိတာကိုး။ အဲဒီအချိန်မှာ ရေသူမက သင်္ဘော အနားရောက်နေပြီ…သိပ်မဝေး ၁၀ မီတာ လောက်ပဲ ဝေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လည်း အသက်ကယ်ဘောကွင်းကြီး ကိုင်ပြီး ကြည့်နေလိုက်ရတော့တယ်။ သေသေချာချာ မြင်ရတော့…ယောကျာ်းဗျ…ရေသူထီး…ဖြစ်နေတယ်။ ပါးစပ်ကလဲ Help me, Help me နဲ့အော်နေတယ်။ သူကြီးက မကယ်ရဆိုတော့…အသက်ကယ်ဘောကွင်း ကိုမပစ်ရဲ။ အမိန့် မရပဲ ပစ်လျှင် အဆူအဆဲက ခံရဦးမယ်…သူ့ ထိုက်နဲ့သူ့ ကံပဲလေ။ ဒါနဲ့ ပဲ ရေသူထီး ကို ကျွန်တော်တို့သင်္ဘောက ကျော်သွားပါရော။ သင်္ဘောသားတွေလဲ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် ပြန်လုပ်ရင်း…သူကြီး အကြောင်း အတင်းတုတ်နေကြတယ်…လူတွေ့ တာတောင် မကယ်ဘူး…ဘာညာပေါ့။
ကျွန်တော်က သူကြီးကိုမေးတယ်…ဘာလို့ မကယ်တာလဲ? သူကလည်း ဖြေပါတယ်…ရေသူထီးကို တွေ့ တဲ့အချိန် နဲ့နေရာက အရမ်းနီးကပ်နေ၍ အရှိန်လျှော့လျှင်လည်း ကျော်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ သင်္ဘောတွေ ရှုပ်နေ၍ ကွေ့ လို့ပြုလို့ မလွယ်ကြောင်း… ပြန်ဖြေပါတယ်။ ကျွန်တော်က စောဒကတက်ပြီး… အသက်ကယ် ဘောကွင်းကို ပစ်လျှင်ရတာပဲ ဟုပြောပါတယ်။ သူက…အသက်ကယ်ဘောကွင်းတွင် သင်္ဘော နာမည် ပါကြောင်း…ပစ်လိုက်လျှင် ကုမ္မဏီကို ဖြေရှင်းချက်တွေ ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေပါတယ်။ ဟုတ်တော့လဲ ဟုတ်ပါတယ်…သင်္ဘောတွေက အချိန် တိတိကျကျ အလုပ်လုပ်ကြရ ပါတယ်။ ကွန်တိန်နာတွေကပိုဆိုးတယ်…ဒီနေ့ ဒီအချိန်ဆို ရောက်အောင်မောင်းပဲ…မရောက်လို့ ကတော့…ကုမ္မဏီက သူကြီးကို ထောင်းမှာ။ သူလဲအထောင်းဘယ်ခံ ချင်ပါ့မလဲ။
ဒါနဲ့ ဘဲ ကျွန်တော်လည်း နောက်က သင်္ဘော ၎င်း ရေသူထီးကို ကယ်မလားလို့မှန်ပြောင်းနှင့် ကြည့်တာပေါ့။ သူ လည်း မကယ်ဘူးဗျ။ ဪ တော်တော် မေတ္တာ တရား ခေါင်းပါးပါ လားလို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ နောက် ၄၅ မိနစ်လောက် လဲကျရော ရေသူထီး ကို ကယ်တင်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သင်္ဘောတစ်စီးမှ ကြေးနန်းပို့ လိုက်ခြင်းကြောင့် စိတ်သက်သာရာ ရသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ရေသူထီး နေရာမှာငါသာ ဆိုလျှင်……..THE END………. ပေါ့ဗျာ။
E. T has written 10 post in this Website..
View all posts by E.T →
လူဘဲဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။ Help me, Help me အော်နေတယ်ဆိုမှတော့။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဂြိုလ်သားလေး အဲ့ .. ယောင်လို့ အီးတီလေးရေ
အလုပ်များနေလို့မရိုက်ဖြစ်လိုက်ဘူး။ ရိုက်လိုက်ရမှာ။
သက်သေ ပြလို့ မရတော့ဘူး
ကယ်သူမရှိရင် အဲဒီရေသူထီး နောင်ဘ၀ တကယ့်ရေသူထီးဖြစ်တော့မှာ
စင်္ကာပူရေလက်ကြား ထဲမှာ သင်္ဘောတွေအားလုံး
SBE ( Stand By Engine ) နှင့်ပဲမောင်းတာပဲ ။
Super Tanker ကလွဲပြီး Speed မလျှော့နိုင်စရာ မရှိပါဘူး ။
သူကြီးက အရမ်းနီးလို့ မကယ်နိုင်ဘူး ဆိုရင်လဲ
Life Buoy & Smoke Signal တော့ အနဲဆုံးပြစ်ချပေးရမှာပါ ။
ပြီးမှ Singapore VTIS ကိုအကြောင်းကြားရင်
VTIS ကတောင် Thank You လုပ်အုံးမှာပါ ။
အလကား သူကြီး သူစာတိုစာရှည် မရေးချင်တိုင်း
သူကြီးက ရွှေပဲလား ။
Next Port က Singapore ဆိုရင်တော့
MPA ( Maritime Port Authority ) ကို လက်တို့လိုက်ရုံပါပဲ ။
သူကြီးက အဲဒီတော့မှ MPA ကို သူ့လုပ်ရပ်မှန်ကြောင်း
ပိုင်ပိုင် နိုင်နိုင် ကြီရှင်းပြ ပါစေပေါ့ ။
ဟုတ်ကဲ့ တစီးလုံး ရွှေ ပါ။ ကျွန်တော်က Life Buoy with Smoke Signal နားမှာပါ။
ချလိုက်ရင် သူ့ ရှေ့ကွက်တိ ရောက်သွားမှာ…သင်္ဘောပေါ်မှာ အမိန့် က အမိန့် ဆိုတော့
မလုပ်ရဲပါ။ သူကြီးက English လို သိပ်မကောင်းလို့စာတိုစာရှည် မရေးချင်ဘူး ထင်ပါတယ်။
ဟေး..ဒါမှ ဒို့ လှေသဂျီးကွ။ ရွာကိုဘာမှတ်သလဲ။ ကိုအီးတီခင်ဗျား.. ဆက်၍ စာကောင်းများ မျှော်နေပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဆိပ်ကမ်းကပ်တဲ့အခါ သင်္ဘောသီးများ ဘုရားတရား အားထုတ်၊ ပုတီးစိပ် မေတ္တာပို့လုပ်ကြသည်၊ အပျော်အပါးလုပ်သူ မရှိသလောက်ဟု ရွာ၏ လှေသကြီး ဩဇီဦးဖောမှ ပြောဖူးပါသည်။ ဟုတ်မဟုတ် ကိုယ်တွေ့နှင့် အမြင်ကိုပါ ပို့စ်တပုဒ်ရေးရန် တောင်းဆိုပါ၏။
ဦးဖော ရေးတာ ပိုကောင်းမယ် ထင်တယ်။ ဦးဖောက old service…old service!!
ရေးပါ ကို အီးတီ ရယ် ။
အဘတို့က အသက်ကြီးပါပြီကွယ် ။
ကို အီးတီ တို့လို လူငယ် ခြေတက်လေးတွေကိုပဲ
ဘာကိုကြည့်ပြီး အထီးလို့ ပြေတာလဲဟင်
ရေသူထီးက အဲနေရာမှာ…ငါးရှဉ့် ဆင်းငုပ်နေတာလားဟင်
လူ့အသက်ကို တန်ဖိုးထားတဲ့ လူတိုင်း အမိန့် ၊ ပြစ်ဒဏ်တွေဆိုတာထက် အသက်ကယ်ဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ် … ။သူ့အသက်ကယ်လို့ …. ရလာတဲ့ ပီတိက …. arrival နောက်ကျလို့ အရစ်ခံရမှာနဲ့ ပြန်ချေလိုက်လျှင်တောင် အများကြီး သာနေပါသေးတယ် … ။ လူသား အချင်းချင်း စာနာစိတ်တွေ တကယ်ခေါင်းပါးကုန်ကြပြီ … စိတ်မောဒယ်
ကျွန်တော် သူကြီးမင်း ဖြစ်ရင် မမတုံး ပြောတဲ့အတိုင်း လူသား အချင်းချင်း
အနော် က အီးတီ စာကို ဖတ်ပြီး
ဟိုရခိုင်ဘက် မှာ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ရေသူထီး အကြောင်းရေးထားမယ် မှတ်နေတာဗျ
ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ အီးတီ တို့ သဂျီးက တော်တော်လောတာဘဲနော်
မဟုတ်ရင် ဘယ်ချိန်ထိ ဒီရေသူထီးပင်လယ်ထဲမှာယက်ကန်ယက်ကန်ဖြစ်နေမလဲမသိ
ကိုအီးတီရေ နောက်ပိုင်းအတွေ့အကြုံတွေလဲဆက်ရေးပါဦး အားပေးပါတယ်နော်
တိုက်တန်းနစ် ရုပ်ရှင်ထဲက အနီးဆုံး သင်္ဘောရဲ့ ဥပက္ခာပြုမှုကြောင့် လူပေါင်းများစွာ သေရသလိုမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ တလောက တိုက်တန်းနစ် ရုပ်ရှင်ကို အဖြူအမဲ ရိုက်ထားတဲ့ ဇတ်လမ်းလေး ကြည့်ရတယ် နာမည်ကြီးတဲ့ ရုပ်ရှင်က အချစ်ကို အဓိက ထားထားပေမဲ့ အဖြူအမဲရုပ်ရှင်က အဲဒီအချိန်မှာ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စတွေကို သေချာ ရိုက်ထားတာ တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ရိုက်ထားတာ တော်တော် ကောင်းတယ်။
အဲဒီနားသွားရင် အော်သံဆူသံတွေတောင် အခုထိ ရှိတုန်းဆိုလား.. ကြားဖူးတယ်။ ရွာထဲက သင်္ဘောသီးတွေ ရောက်ဖူးလား အဲဒီနားကို ???
ရောက်တုန်းကကော ဘယ်လိုနေခဲ့လဲ သိတဲ့ လူ ရှိရင် ပြောပြပါလား။
အထီးကြီးမို့ မကယ်တာပါ။ အမ သာဆို သူကြီးကိုယ်တိုင်ဆင်းကယ်မှာ။ အဟီ ဂျက်စပဲရိုး ဇာတ်ကားထဲက ရေသူမလေး ဖြစ်ကြည့်ပါလား။
ရက်စက်လိုက်တဲ့သဂျီး လုပ်ရက်လိုက်တဲ့သဂျီး သူ့အလှည့်ကျမှ သင်္ဘောတက်ကျိတ်တာခံရမယ်။ x(
ကိုယ်ရှေ့မှာ ဒီလိုဖြစ်နေတာ နေလဲနေနိုင်တဲ့ သဂျီး
ဒီလိုနေရာမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ရေနစ်နေတယ်ဆိုရင်ကော ရေသူမလို့ ပြောမှာလားဟင်… မိန်းကလေးသာ နစ်နေခဲ့ရင် သူကြီးက ကယ်မယ်လို့ မြင်မိတာပဲ အဟိ…. ဟိတ်ကောင်တွေ အမိန့် ဘောကွင်းချ………… ဒါပဲ
မှန်တာပေါ့။ မိန်းကလေးသာ ဆိုရင် သင်္ဘောသားတွေ အားလုံး ရေထဲ ဒိုင်ဗင်ထိုးပြီး
ရေသူထီးကလည်း ဘယ်လိုက ဘယ်လို တစ်ယောက်ထဲ ပင်လယ်ထဲ ရောက်နေရပါလိမ့်??????